Nagu Saabsan - Lenda International Tradingl Co., Ltd.
Soosaarista alaabada farsamada sare ee deegaanka ayaa had iyo jeer ahayd meelaha ugu waaweyn ee diiradda la saarayo shirkadda LENDA. Gaar ahaan qaabeynta, soosaarka iyo suuqgeynta mootooyinka korontada, baaskiillada, boodhadhka korantada iyo boodhadhka barafka lagu ciyaaro.
Iyada oo horumarka degdegga ah ee suuqa caqliga leh, tartanka suuqa ayaa sii badan oo xanaaq badan;
Sanadkii 2017, Shirkadda LENDA waxay shaqaaleysiisay karti-xirfadeedyo warshadeed oo heer sare ah gudaha iyo dibadaba, waxay kordhisay maalgashiga cilmi baarista teknolojiyada iyo horumarka, waxay sameysay koox si farsamo leh u tababaran oo khibrad leh, waxayna sameysay astaan ​​u gaar ah oo leh teknolojiyad ahaan hagitaankeeda.
"Adag oo masuul ah, kaliya inuu macaamiisha ka dhigto dhoola cadeyn qanacsanaan" waa liistada adeegga LENDA waana mid ka mid ah sababaha ay shirkada ugu caan baxday macaamiisha marka loo eego shirkadaha kale ee warshadaha. LENDA waxay diiradda saareysaa horumarinta iyo dayactirka suuqyada dibedda. Waqtigan xaadirka ah, suuqyada dibedda ee LENDA waxay ku fidday Yurub, America, Aasiya iyo dalal kale, iyagoo macaamiisha maxalliga ah siinaya alaab tayo sare leh. Shirkadeena waxay u hogaansantaa fikradda ganacsiga "Badbaadsanaanta Tayada, Horumarinta amaahda, Karti maareynta". Waxaan sameyneynaa dadaallo lagu wanaajinayo tayada wax soo saarka, tikniyoolajiyada iyo adeegyada qanacsanaanta, annagoo u sameynayna macaamiisha qiimo aan xadidneyn. Isla mar ahaantaana, waxsoosaarka shirkadeena waa mid casri ah, jaangooyooyin ah iyo caqli badan si loo abuuro tartan kaladuwan oo aasaasi ah, oo aan bixinaynin kaliya fikradaha horumarineed ee wax ku oolka ah, laakiin sidoo kale waxay matalaan jihada horumarka mustaqbalka iyo isbeddelka guud ee warshadaha is-dhexgalka otomaatiga ilaa xad cayiman.